Accueil > Gazetin'ny nosy > Kandidà : Matahotra ny vahoaka eto Antananarivo
Kandidà : Matahotra ny vahoaka eto Antananarivo
Hatramin’izao fotoana izao dia mbola mangingina ny fisehoana ampahibemaso ataon’ireo kandidà mpilatsaka ho filoham-pirenena ny faha 7 novambra 2018 izao eto Antananarivo renivohitra. Manontany tena avokoa ny mpanaraka ny raharaham-pirenena amin’ny antony tsy isehoan’izy ireo amin’ny vahoakan’Antananarivo toa izao. Tetika ve sa hakanosana? Samy manana ny fahitany izany ny olona tsirairay avy.
Tokony ho hita ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany amin’ny fotoanan’ny fanomanana fampielezan-kevitra toa izao hiresahana amin’ny vahoaka ny tokony hataon’ireo kandida ireo handresen-dahatra ny mpifidy. Eo anatrehan’izany rehetra izany dia maro ny vahoaka no manontany hoe hisy ve ny fifidianana ity sa tsia. Fanontaniana izay tsy tokony hipetraka intsony amin’izao tapabolana mahery alohan’ny fanombohan’ny propagandy izao. Misy amin’ireo kandidà mpilatsaka ireo no tsy fanta-bahoaka mihitsy eto Antananarivo. Rehefa tsy hita eto amin’ity renivohitr’i Madagasikara ity nefa dia toa ny tsy misy.
Ankoatr’ireo dia mandositra tsy misy hita koa ireo mpanao pôlitika. Ireo izay sendra mifanena amin’ny mpanao gazety dia mametraka fanontaniana indray fa tsy manam-baovao ambara intsony. Mangina tanteraka ireo toerana fanaovana fivoriana pôlitika.
Inona no anton’izao fahanginana eto Antananarivo izao? Matahotra hiseho ireo kandidà satria tsy manana hevitra hatolotra intsony eny na dia ireo heverina fa fanta-bahoaka aza.